Fangaraharahan’ny famatsiam-bolan’ny fampielezan-kevitra, mila vahaolana – Politika
Home Politika Fangaraharahan’ny famatsiam-bolan’ny fampielezan-kevitra, mila vahaolana
24 août 20197 mai 2020By Raoto Andriamanambe
Na dia heverina aza fa latsa-danja manoloana ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ny fifidianana solombavambahoaka ho avy io dia anisan’ny fotoana iray hampiasan’ny kandidà enti-manana mihoampampana, na vola io na fitaovana. Manoloana ny resabe ateraky ny ahiahy ny mety tsy fangaraharahan’ny famatsiam-bola ny fampielezan-kevitra, manolotra soso-kevitra hoenti-mamaha ny olana ity mpandinika politika ity.
teraka resabe hatrany matetika ny vola ampiasain’ny kandidà amin’ny fifidianana. Manao ny fanaraha-maso ny famatsiam-bolan’ny kandidà araka ny voalazan’ny lalàna ireo rafi-panjakana natokana ho amin’izany, fa eo ihany koa ireo tsy miankina amin’ny fanjakana. Na izany aza, mbola tsy ampy ny ezaka sy vokatra azo tsapain-tanana amin’ny fanaraha-maso marina ny famatsiam-bolan’ny kandidà. Anisan’ny antony iray tsy mampahomby ny fanaraha-maso ny famatsiam-bola ny fampielezan-kevitry ny kandidà, ny tsy faneken’ny olom-pirenena hijanona ho tompon-trano mihono; ka miezaka mamantatra ny niavian’ny vola ampiasain’ny kandidà sy ny hampiasana izany.
Antony fanaraha-maso sy ny famerana ny vola ampiasaina
Maro no mitaky ny tokony hisian’ny fanaraha-maso sy famerana ny fandaniana ataon’ny kandidà ho an’ny fampielezan-kevitra na mpanao politika io na fiarahamonimpirenena na koa fikambanana maro samihafa. Raha anatin’ny valaben’ny lalàna tanteraka ny fanantanterahana io fanaraha-maso io any amin’ny firenen-kafa dia mba hahafahana mampitovy tantana ny herijika ananan’ny kandidà isanisany ary misy ny famerana ny vola ampiasaina satria ny fanjakana no mamatsy vola ny antoko politika sy ny fampielezan-kevitra. Ara-dalàna, noho izany, raha manara-maso ny toe-bola ny fitondrana. Voalohany mba tsy ho ataon’ny antoko na kandidà hampitomboana ny fananany manokana ny vola omena ampiasainy. Manaraka izany, misy ny famerana mba tsy hanao fanonerana be loatra amin’ny antoko ny fanjakana ary farany dia ny hahazoana mahafantatra hoe : hatraiza ny tamberin’andraikitr’ilay kandidà manoloana ny mpamatsy vola azy. Eo amin’io lafiny io kosa, manana ny antokon-draharaha misahana ny fanaraha-maso ny tsenam-baro-panjakana ny Repoblikan’i Madagasikara izay tokony hanao ny asany araka ny tokony ho izy. Toy izao ny fisehony matetika: manonitra ampaham-bola amin’ny fandanian’ny kandidà mandritra ny fampielezan-kevitra ny fanjakana (47% izany ohatra ho an’ny Frantsa). Tsy tokony ho ambony be noho izany fitambaran’ny vola lany rehetra, fa raha tsy izay dia mety havesatra loatra ilay 47% anjaran’ny fanjakana; ka hanjary hampibaby kitra ny mpandoa hetra io. Raha ny eto Madagasikara dia iaraha-mahalala fa tsy mamatsy vola ny antoko politika ny vahoaka. Ilaina noho izany ny mametra ny fandaniana amin’ny fampielezan-kevitra mandritra ny fifidianana rehetra: fifidianana filohampirenena, solombavambahoaka, loholona, fifidianana eny anivon’ny faritany sy ny faritra ary ny kaominina, ka mipaka hatrany amin’ny fokontany. Ny hanery ny antoko politika hampahafantatra izay ao an-damosiny koa anefa mbola ady hevitra, indrindra manoloana ny zon’ny olom-pirenena hanana ny fiainana manokana, ny tsiambaratelony ara-bola anivon’ny banky sy ny amin’ny safidiny. Any amin’ny firenen-kafa, ny antoko sy izay misora-tena ho mpamatsy azy dia manao fanambarana ampahibemaso sy an-tsitrapo ary tombontsoa azo amin’izany dia ny fahazoana fanenàna hetra aloa amin’ny fanjakana mihitsy aza rehefa manara-dalàna toy izany.Anjaran’ny fanjakana avy eo ny mamporisika ny olom-pirenena manoloana izay tombontsoa eo amin’ny lafin’ny fandoavan-ketra omena ireo antoko manara-dalàna izay. Tsy tsy mbola misy ny fanadihadiana hahazoana mahafantatra raha toa ka misy olom-pirenena maniry ny hanao fanambarana ampahabemaso fa mamatsy vola antoko iray. Ny fametrahana izany ho « tsy maintsy atao » koa, dia mety hiteraka fahalainan’ny olom-pirenena hamatsy vola antoko iray tsotra izao noho izy tsy te hiseho ampahibemaso. Ahiana koa manoloana izany ny mety tsy hisian’ny olom-pirenena hamatsy vola antoko noho ny fisian’io « fanerena » io.
Tolo-kevitra voalohany: misalahy handoa miaraka amin’ny fanjakana ny sandam-bola mitovy ny kandidà ary manaiky ny laminasany
Avy amin’ny fampiasana biletà tokana izay dingana lehibe mankany amin’ny fampitoviana lenta ny kandidà no nitsirian’ny hevitra. Ny fampiasana ny biletà tokana na ny milina elektronika, dia hahazoana antoka fa ho hita manerana ny birao fandatsaham-bato ny kandidà tsirairay nanefa antoka ara-bola mitovy tamin’ny fanjakana. Azo heverina noho izany ny hadoavan’ny kandidà vola mitovy amin’ny fanjakana ary ity farany hanao izay hahatontosa araka ny tokony ho izy ny fampielezan-kevin’ny kandidà : izany hoe, ny fanjakana no handamina ireo hetsika hatao (miaraka amin’ireo fitaovam-pitaterana), ny fampiasana ny haino aman-jery (miankina na tsy miankina) sy ny fandaminana ny petadrindrina toy ny efa ataon’ny fanjakana amin’izao fotoana izao,sns. Amin’izay fotoana izay, ny fanjakana no mamaritra ny fandaharam-potoana rehetra ary tsy maintsy manaraka izany ny kandidà. Na izany aza, tsy tokony hihatra io lalàna io raha tsy mandritra ny fotoanan’ny fampielezan-kevitra. Noho izany, mialoha ny fampielezan-kevitra na eo anelanelan’ny fihodinana roa, tsy hisy ny fitoviana lenta satria ny antoko na ny kandidà dia malalaka tanteraka amin’ny fanaovana ny fampielezan-keviny. Ny antoko politika kosa anefa tsy maintsy manana kaonty any amin’ny banky izay azony ampiana vola tsara amin’ny fotoana ivelan’ny fampielezan-kevitra. Manaraka izany, ezahina amin’ny masontsivana apetraka ny amin’ny filatsahan-kofidina ny tsy hahabe tsy andraofana ny kandidà. Satria raha ny fandoavana ilay vola hoenti-manao fampielezan-kevitra any amin’ny fanjakana irery ihany mantsy no atao mason-tsivana, dia azo heverina fa ho maro be aoka izany ny kandidà mirotsaka ho fidiana. Ilaina ohatra ny fametrahana fiahiana na fanohanana na avy amin’ny olom-boafidy na avy amin’n olom-pirenena mivantana. Hitombo isa, araka izany, ny mpirotsaka hofidina na eo aza ny fiheverana ny amin’ny fampiharana na tsia ny fitsipi-dalao ny amin’ny hoe : tsy azo ekena ny maha kandidà raha toa ka tsy natolotra antoko ilay mpilatsaka.
Kanefa misy sakana roa azo heverina amin’izay. Ara-poto-kevitra ny voalohany. Ny lalàna sy ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana dia nametraka nandritra ny fifidianana Filohampirenena ny taona 2018, fa tsy maintsy ahian’ny mpifidy vaventy (toy ny zava-misy any Frantsa sy any ankafa) na koa atolotry ny antoko ny kandidà. Miteraka resabe anefa izany any an-kafa, raha mbola tsy misy kosa hatreto ireo mitarika resabe ny amin’izany eto Madagasikara raha jerena ny tantaram-pirenena. Raha jerena kosa anefa ny kolontsaina politika malagasy, hoy Eric Dupont, ny Lalàmpanorenan’ny Repoblika fahatelo, dia mamela malalaka ny olom-pirenena rehetra hilatsaka hofidina mba « hanamarika ny fialàna tamin’ny fanaon’ny fitondrana Ratsiraka izay nanery ny tsy maintsy hirotsahana anaty antoko mpikambana ao amin’ny «Front National de la défense de la révolution » na FNDR.
Mifototra amin’ny lafiny lalàna ny faharoa. Ny lalàna izay nanasarotra ireo fombafomba enti-manangana antoko ary misy ny azo iadian-kevitra ny amin’izay. Farany, ahiana amin’ity fampielezan-kevitra raisin’ny fanjakana an-tanana ity ny tsy fahampian’ny hetsika atao sy fahavitrihana izay heverina fa hisy fiantraikany eo amin’ny taham-pandraisana anjara nohon’ny tsy fahampian’ny fanentanana ny olom-pirenena afatsy hoe angaha apetraka ho andraikitra tsy maintsy efaina ny mandeha mifidy. Mbola mila dinihana koa anefa ny amin’izany. Azo heverina, ohatra, ny hisian’ny fanasaziana raha toa ka ambony loatra ny tahan’ny tsy fandehanana mifidy, toy ny famerenana ny latsa-bato, izay hita fa mila vola tokoa; na koa saziana amin’ny raharaham-pitsarana tsotra na ady heloka io tsy fandehanana mifidy io. Tokony hojerena manokana ihany koa araka izany ny vatofotsy sy vatomaty izay mety hitarika amin’ny fanafoanana ny fifidianana.
Tolo-kevitra faharoa nalaina avy amin’ny fanao any ivelany : fanaraha-maso ny loharanom-bolan’ny kandida, ny fandaniana sy ny famerana izany
Misy tokoa ny fanaraha-maso azo tanterahina ny amin’ny loharanom-bolan’ny famatsiam-bola fampielezan-kevitra, ny fandaniana sy ny famerana izany. Mba hahazoana manara-maso ny loharanom-bolan’ny kandidà, tsy maintsy ho voakitika ny tsiambarantelon’ny kaonty kirakiraina amin’ny banky, ny fananana zo amin’ny latsa-bato miafina sy ny zo amin’ny fiainana manokana amin’ny alalan’ny fametrahana lalàna maty paika.Ohatra : amin’ny alalan’ny fandrisihana amin’ny fandoavan-ketra izay hahazoan’ny fanjakana mampahafantatra ampahibemaso ny anaran’ireo misitrika izany (na olon-tsotra io na fikambanana na orinasa,…) ny anaran’ireo misitraka (na olona ara-moraly toraka izany koa ny ara-batana). Afaka mampahalala ny endrin’ny fanohanany araka izany ireo mpamatsy vola: vola, trano; nomena ampiasaina maimaimpoana na nasiana fihenam-bidy ny saram-panofana (efitrano filanonana, efitrano fivoriana, foiben-toeran’ny kandidà,…), fitaovana (fiara, fiaramanidina,fanamafisam-peo,trano fisakafoanana, trano fandraisam-bahiny,…), izany dia mba hahazoany misitraka fihenan-ketra aloa amin’ny fanjakana, izay tsy voatery ho vola fa mety ho asa na zavatra ilaina ho an’ny mpanakanto, mpanao gazety, mpanao dokambarotra, mpametaka afisy,…
Manaraka izany, ny lalàna amin’izao fotoana dia mandrara ireo mpiasam-panjakana ambony tsy hanao fampielezan-kevitra, nefa mety ho azon’izy ireo hatao ve ny mamatsy vola kandidà ? Mikasika ny fanaraha-maso ny fandaniana kosa indray, miditra an-tsehatra manara-maso ny haikaontim-bolan’ny antoko/kandidà ny fanjakana mba hahafahana manamarina raha tena nampiasaina tamin’ny fampielezan-kevitra tokoa ny fanampiana nataon’ilay mpanohana na navily lalana ho an’olon-tokana na ny mpikambana maro ao anatin’ny antoko. Tsy asa mora anefa izany !
Momba ny famerana ny fandaniana azo atao, izay efa noresahana tetsy ambony kosa, irosoana izany raha toa ny fanjakana tsy te hijoboka amin’ny fanonerana vola be loatra amin’ny antoko. Raha toa ka tsy te hiditra an-tsehatra amin’ny amin’ny fanefana ny saran’ny fandaniana amin’ny fampielezan-kevitry ny kandidà ny firenena malagasy, tokony hoezahina hoferana ny fahafaha-manampy azon’ny olona iray atao amin’ny antoko. Tsy misy anefa afaka manamarina ny momba izany. Ny zo ara-pananana dia manome alalana ny olona iray hanana fahefana feno momba ny fananany manokana, ka tafiditra ao anatin’ireny ny fahazoana manolo-tanana ny hafa. Ny fihoaram-pefy ny amin’ny fanamparam-pananana rahateo dia mety tsy ho voaresaka, raha tsy izay manana tombony ny amin’izany ka manohitra ny mety ho tsy fanarahan-dalàna no manatontosa azy. Ao anatin’ity lafiny famerana ny fandaniana ity ihany, tokony homen-danja kokoa ny fanampiana ara-bola sy fanampiana amin’ny alalan’ny fanomezana trano na fitaovana. Sarotra ny asa miandry ny fanjakana eo.
Ohatra: tompon’orinasan-gazety iray manolotra malalaka na manome fihenam-bidy amin’ny fanaovana fampielezan-kevitra amin’ny fahitalavitrany na ny gazetiny, mpanakanto manao fampisehoana maimaimpoana na manome fihenam-bidy ho an’ny kandidà, olom-pirenena manaiky ny hiantoka ny sakafon’ny mpametaka afisy ho fanampiana kandidà iray. Ankoatra izay, Koa satria tsy dia misy antony loatra ny hamatsian’ny olona tsy mipetraka eto Madagasikara ny antoko eto, dia mbola mampanano sarotra ny famerana ny fandaniana miainga avy any ivelany. Nahoana tokoa moa ny antoko iray no tsy afaka hisitraka ny fandraisana anjara ara-bola avy amin’ireo teratany malagasy monina any ivelany, ny fianakaviana sy ny maro samihafa ? Mba hahazoana manara-maso ny loharanom-bolan’ny kandidà iray anefa, ilaina indrindra ny manao fanadihadiana tsy amin’ilay mpilatsaka hofidina fa amin’ilay manohana azy mihitsy. Ao anatin’ny tatitry ny « Transparency International-Initiative Madagascar », nanao fanambarana ny amin’ny vola nampiasainy nandritra ny hetsika talohan’ny fampielezan-kevitra sy tao anatin’ny propagandy izy ireo. Kanefa na nanome ny tontalim-bola nampiasainy sy nilaza ny amin’ny fidiram-bolany isam-bolana aza, ohatra, ny kandidà nilatsaka ho filohampirenena Omer Beriziky na Dama, ilaina koa ny mamantatra amin’ny antsipirihany amin’ny lalam-piainana nodiavin’izy ireo teto amin’ny firenena, mba hahazoana manao ny tomban-karenan’izy ireo. Azo atao tsara izany any amin’ny firenena mandroso izay tsy misy tsy voaara-maso raha ny sehatra maro isan-karazan’ny toe-karena. Eto amintsika kosa anefa dia sarotra ny mikirakira ny antontan-kevitra momban’ny kandidà ary rehefa fotoanan’ny fampielezan-kevitra ihany no misy ny fanaraha-maso. Azo tanterahina koa anefa ny fitsirihana ny loharanom-bola, ny fandaniana mandritra ny propagandy sy ny famerana izay azo lanian’ny antoko, ao anatin’ny fotoana tsy iatrehana ny fifidianana. Anisan’ireny, ohatra, ny fandaniana mandritra ny kaongresy, ny fihaonan’ireo rantsan-mangaikam-paritra na ny manerana ny firenena (fikaonandoha, atrikasa, velakevitra,…): ny vola lany amin’ny serasera sy ny fivezivezena, ny fitsingeranan’ny taona nijoroan’ny antoko na ny mpanorina, ny fidirana na ny fialan’ny antoko eo amin’ny fitondrana, ny fanokanana zava-bita ataon’ny olom-boafidin’ny antoko sy ny hetsika madinidinika samihafa. Azo atao tsara izany fanaraha-maso izany kanefa koa asa sarotra sy manahirana ho an’ny fanjakana, na koa ho an’ny rafitra hisahana ilay fanaraha-maso.
Tolo-kevitra fahatelo : manahirana ny fanatanterahana azy saingy mitaky fandraisana andraikitry ny olom-pirenena.
Raha malailay fonosana ny handoa vola ho an’ny antoko politika amin’ny alalan’ny fanjakana ny olom-pirenena, dia tsy hivoatra mihitsy ny fanaovana politika eto. Eo indrindra anefa no tokony hampidirana an-tsehatra ny fanabeazana ny olom-pirenena. Hazavaina amin’izy ireo fa azo atao ny miroboka ao anatin’ilay fandraisana andraikitra ary tsy tokony hisy hampanongo tena ny amin’izany. Ny tanjon’io fanabeazana io dia ny mba hamporisihana ny olom-pirenena hilaza izay fanohanana mety ataony ho an’ny antoko iray. Asa lavitr’ezaka io raha toa ka very hasina eo imason’ny olom-pirenena ny atao hoe politika ary tsy mahita antony tokony handraisana anjara amin’ny fiainam-pirenena intsony ny olom-pirenena.
Na dia misy aza ireo teratany malagasy na koa teratany vahiny sahy milaza ampahibemaso ny fanohanany kandidà iray ary milaza ny endriky ny fanohanany na ara-bola io na ara-pitaovana, dia andraikitry ny olom-pirenena ny mifidy na tsia kandidà iray izay hita fa alokalofan’ny mpamatsy vola mampiahiahy izay mody miafina endrika ao ambadiky ny fanaovana asa soa Mifamadika amin’izay fotoana izay ny andraikitry ny roa tonta. Tsy anjaran’ny kandidà intsony ny manao fanambarana, fa an’ilay olona manohana. Ohatra : ireo mpametaka afisy, ny mpanao gazety, ny tompon’orinasan-gazety, ny mpanakanto, ny tompon-trano na tompona fitaovana sy kojakoja maro samihafa kojakoja samihafa… no mampahafantatra ny fanohanana nataony na azony avy amin’ny kandidà iray. Sarotra tanterahina io fa azo heverina kosa rehefa mandray andraikitra ny isam-batan’olona.
Vahaolana maharitra : fisian’ny lehiben’ny mpanohitra
Ny fisian’ny lehiben’ny mpanohitra dia midika fa efa ofisialy ao anatin’ny raharaham-pirenena ny fanaovana fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana, satria efa afaka mifaninana amin’ny mpitondra sahady izy amin’ny alalan’ny fampahafantarana ny programan’asany amin’ny vahoaka na mbola mialoha ny vanim-potoam-pifidianana aza. Ny fanjakana, araka izany, no manome famatsiam-bola io lehiben’ny mpanohitra io na ny antoko miray lalana aminy misitraka tombontsoa mitovy amin’ny filoha lefitry ny antenimierampirenena io lehiben’ny mpanohitra io. Ny satan’ny mpanohitra koa anefa dia hiteraka fiforonana toerana maro be sy hafa madinidinika andraisana karama izay tsy azo hamaivanina. Ho azo tanterahina amin’izay fotoana izay ny fanaraha-maso ny kaontim-bola ivelan’ny vanim-potoanan’ny fifidianana, tsy ny an’ny lehiben’ny mpanohitra ihany, fa na ny antokony sy ireo mpiara-dia aminy koa aza. Handravina ny ady hevitra ny amin’ny tokony hisian’ny fifehezana ny fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana izany ary ho lasa aim-bery maina aza ny fanaovana izany raha izay no tanteraka.
Hisorohana ny fividianana safidim-bahoaka ny fijoroana amin’ny tsangan-kevitra
«Ny fananana tsangan-kevitra mafy orina no andry iray hahazoana misoroka ny kolikoly. Ny olom-pirenena manana faharesen-dahatra ny amin’izany dia tsy hanaiky velively ny volan’ny mpanao politika tsy mitovy fomba fijery aminy ary tsy miandry tatireraka amin’ny volan’izaympanao politika iray lapa aminy, satria efa mitovy rahateo ny hevitra tohanan’izy ireo. Kanefa nanomboka ny taona 1991, ireo manam-pahaizana malagasy dia nirona tamin’ny politika mifanaraka amin’ny zava-misy avy hatrany izay avadika ho tari-dalana avy eo.
Marina fa any amin’ny Tandrefana, na ireo olom-pirenena manana tsangan-kevitra arovana aza dia manotrona na mandray anjara amin’ny fampielezan-kevitra andaniam-bola be. Na izany aza, ireo olom-pirenena mandatsa-bato ho ana antoko na kandidà iray, dia mivondrona amin’ny ankapobeny amina fikambanana na zanak’antoko akaiky ilay olona na antoko tohanany. Ary mandritra ny fampielezan-kevitra, anjara asany voalohany ny mamporisika ireo mitovy fomba fijery aminy mba handatsa-bato ho an’ilay kandidà, ary ny faharoa dia ny manentana ireo misalasala; fa ny fahatelo izay tsy mpitranga matetika dia ny mitaona ireo tsy mitovy hevitra aminy mba hanohana ny kandidàny. Ny asa goavana miandry ao anatin’ny fanaovana politika, araka izany, dia izay tanterahina ivelan’ny vanim-potoanan’ny fifidianana ary lava dia lava ny fetrany. Ny fananana tsangan-kevitra ijoroana ihany koa no mamaha ny olana ateraky ny tamberin’andraikitra. Ara-dalàna ho an’ny antoko mampihatra izany raha mifototra amin’ny hevitra ijoroana aloha ny matoan-tamberin’andraikitra imasoany, izay vao mivelatra amin’ny mpanohana azy, ka ao anatin’ireny ireo mpamatsy. Na inona na inona anefa ny vahaolana raisina, fototr’olona ilam-piheverana ny fitondran-tenan’ny olom-pirenena isanisany. Satria mora ny mijoko azy amin’ny mena miraviravy rehefa tsy manan-tsangan-kevitra ijoroana sy ifotorana izy. Ny tamberin’andraikitra manoloana ny olona mpamatsy vola koa dia tokony hasiam-patrany sy ferana, amin’ny alalan’ny fanaraha-mason’ireo andrimpanjakan’ny Repoblika.
Toavina Ralambomahay, mpanoratra boky momba ny politika, mpisera amin’ny akademia malagasy
Antenimierampirenena, Antoko politika, fampielezan-kevitra
Previous ArticleInterview de Kader Irchad Barry, coordinateur national de la campagne «Rasoaza» : «Les violences basées sur le genre sont un phénomène sous-déclaré»Next ArticleResadresaka tamin’i Noroarisoa Ravaozanany